चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीलाई दिदी मान्दै आएका र्यापर भिटेनले मासु बोकेर प्रियंकालाई भेट्न गए. – Kavrepati
Home / मनोरंजन / चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीलाई दिदी मान्दै आएका र्यापर भिटेनले मासु बोकेर प्रियंकालाई भेट्न गए.
admin3weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 54 Views
चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीलाई दिदी मान्दै आएका र्यापर भिटेनले सुँगुरको मासु बोकेर प्रियंकालाई भेट्न गए चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीलाई दिदी मान्दै आएका र्यापर भिटेनले सुँगुरको मासु बोकेर प्रियंकालाई भेट्न गए,
प्रियंकाकी छोरीलाई भिटेनले दिएको उपहार देखेर प्रियंका र आयुष्मान दुवै दंग, भटिेनले खुलाए अहिलेसम्म बाहिर नआएको रहस्य, बंगुरको मासुको गन्ध आएपछि प्रियंकाले भोमिट गरिन्, भिडियो भाइरल
समूह बनाएर शेयर कर्नरिङ गर्नेहरूले साना पूँजी भएकालाई मात्रै टार्गेट गर्ने गरेको र वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी बढी भएकोले उनीहरू वाणिज्य बैंकको शेयरमा हाबी हुन नसकेको प्रधानको ठम्याई छ।
बजारमा एकथरी लगानीकर्ताले समूह बनाएर कर्नरिङ गर्ने र अर्काे थरी लगानीकर्ता त्यसैमा रमाउँदै गएकोमा चिन्ता लागेको प्रधानले बताएका छन्। उनी भन्छन् “जुन तरिकाले बजार स्वच्छ तरिकाले चल्नु पर्ने हो।
मौद्रिक नीतिले १२ करोडको क्याप लगाएपछि बजारमा ठुलो मात्रामा सेल आउन सक्ने सम्भावना रहेको र उक्त सेल प्रेसरलाई १२ करोडकै नीतिले नै वायर आउन वञ्चित पार्ने भएकोले आउने दिनमा शेयर बजार जसरी बढिरहेको थियो त्यसरी नै बढिरहन सहज परिस्थिति नहुने उनको अनुमान छ। “मौद्रिक नीतिले १२ करोडको सीमा लगाएको छ।
त्यसको असरले बजारमा शेयर सेलिङको प्रेसर आउने प्रशस्त सम्भावना देखेको छु। किनकि जसरी सेल आउँछ त्यसलाई पचाउने क्यपिसिटि भएका वायर बजारमा हुने छैनन्। किनकि केन्द्रीय बैंकको सीमा शेयर किन्नेलाई पनि लाग्छ। त्यसैले बाइङ क्यापेसिटि पनि घटाइ दिन्छ भनेको हो। यस्तो अवस्थामा साना लगानीकर्ताले बजारलाई कति दिन थेग्न सक्लान् ? प्रधानले भने।
Previous डिभोर्स पछि स्मारिकाले यो हाल ,भइन बिरामि,खान्छिन यति धेरै दबाइ (हेर्नुस् भिडियो )
Next आजै प्रदेश–१का मुख्यमन्त्री बन्न लागेका एमाले नेता भीम आचार्यका कान्छा भाइ घरमै मृत अबस्थामा भेटिए